Mid ka mid ah guulihii ugu fiican ee Inc Apple waa la bilaabay barnaamijka iMovie ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee tafatirka software tahay video in sidoo kale uu oggolaan in iyaga si aad u hesho sida ugu fiican oo ah qaababka weyn guud ahaan gundhig gudahood Barnaamijka hal. Qaar ka mid ah dadka isticmaala si kastaba ha ahaatee ma doonayaan in uu lacag online iyo sabab la mid ah waxa ay raadinayaan xal kale oo lacag la'aan ah. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan barnaamijyada la heli karo lacag la'aan ah online la'aan iyo user wuxuu iyagii ku isticmaali kartaa iyada oo aan wax arrin oo dhib marka ay timaado iMovie iibsiga.
Users ma u xiiseeyaa iMovie sida uu leeyahay xaddidaadyo kala duwan in ay ka gudbaan faa'iidooyinka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in kale oo lacag la'aan ah ayaa la baadhay, si ay uga hubiyaan in ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka ah waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in natiijada yahay oo waafaqsan shuruudaha. Qaar ka mid ah Xuduudda iMovie waxaa lagu sheegay sida soo socota iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in haddii user uu doonayo in uu raadiyo xadeynta ka badan internet-ka oo dhan waa u furan iyaga si loo hubiyo in lagu iibsado waxaa la dhigay ka dib markii cilmi baaris dhammaystiran.
Nidaamka Same waa in loo isticmaalo la abuuro mashruuc sida aan la wadaago karaa nidaamyada kale oo sabab isla mar movie la dhoofiyo ka dibna waxa ay wax walba ka sarreeya oo aan waxba lagu dhameyn karo.
The dhaqdhaqaaqa gudahood iMovie waa mid aad u xasaasi ah oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in ay qaaddo tallaabooyin dheeraad ah si loo hubiyo in filimka si sax ah iyo in line saxar shuruudaha user.
Interface ee barnaamijka ma aha user saaxiibtinimo oo dhan iyo sabab la mid ah barashada iMovie waa howl culus aya hortaala in arrintan la xiriira.
Mashaariicda dheer iMovie qaadataa waqti aad u badan in la dhoofiyo iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ee waa in ay sugaan muddo aad u dheer si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo, filim laga dhoofiyo iyo dadka kale ee u arki kartaa .
Taageero iMovie Ifafaalaha guud ee aan la casriyeeyay oo releases cusub oo la keenay weeraryahanka isticmaalaya farsamada la mid ah hore xaqiiqdii waa calaamad fiican ma at dhan.
Marka laga reebo, kuwaas oo ka liidato waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ugu fiican iyo taagni ee barnaamijyada farshaxanka waxaa lagu sameeyaa si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo karti guud ayaa sidoo kale kor u kacay iyadoo la kaashanayo barnaamijyada lacag la'aan ah in la soo sheegnay lahaa qaybta xigta ee tutorial ah. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka kale farshaxanka iyo iMovie ah waxaa lagu daadiyaa kuwa ha jeclaan samaynta at dhan iyaga ku faraxsan yahay oo uu mabsuud noqdo.
Top 5 kale oo iMovie lacag la'aan ah PC
Si loo hubiyo in waayo-aragnimo ah ee iMovie waxaa ku riyaaqay waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in beddelkooda waxaa loo tixgeliyaa in arrintan la xiriira:
Adobe weerarkii CC pro
Video LAN movie abuure
1. Dub Virtual
Barnaamijka waxaa ay diyaariyeen ururka dub dalwaddii oo ay tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo ah xilligii casri ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in ku dhiirigelinayaan in la ogaado ay farsamooyinka cabsi badan iyo xirfad guud ee arrintan la xiriira. Barnaamijka waxaa isha xor ah oo furan code qoraal ah.
Howlgallada toosan in ay yihiin in lagu sameeyo arrintan la xiriira waa kuwa u oggolaan lahaa user inay hubiyaan in shaqeynta buuxda waxaa ku riyaaqay sameeyo.
Kartida processing Dufcaddii ugu fiican si loo hubiyo in tiro badan oo ah in files la farsameeyo.
Waxa ay taageertaa qaab kasta oo ka AVI in MPEG oo sidaas daraaddeed waa ugu fiican ee mid ka mid ah oo ku saabsan suuqa.
Barnaamijka waxaa lagala soo bixi karaa www.virtualdub.org .
2. Adobe weerarkii CC pro
Teknoolajiyada Adobe hubaal u baahan tahay hordhac lahayn sida ay tahay mid ka mid ah kooxda ugu wanaagsan oo ugu wanaagsan horumarinta in ay la yimaadaan cabsi badan oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka ee tobanka sano ee la soo dhaafay ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi link rasmiga ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo riyaaqay oo lagu rakibay sameeyo.
Interface ayaa sidoo kale fiirin guud ee barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo isticmaala barnaamijka fudayd.
Processing waa badan oo dheeraad ah si dhakhso ah marka la barbar dhigo kooxda ay xafiiltamaan ee arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah waa barnaamijka ugu isticmaalay.
Barnaamijka waxaa lagala soo bixi karaa Pinnaclesys .
3. Video LAN movie abuure
Mar kale u baahan tahay LAN urur video caan ku ah abuurista ciyaaryahan VLC ee hordhaca lahayn. Barnaamijka ayaa in ka yar yahay wadahadal hubiyaa in user helo xoogga video iyo sidoo kale tafatirka image ku qanacsanaanta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi waafaqsan tilmaamaha ku sameeyaan,
uu interface fudud ee barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta nidaaminta.
Si ka duwan ay xafiiltamaan ee barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in xawaaraha guud ee la hayo in ay hal dhibic ka bilowga ilaa dhamaadka.
Waa lacag la'aan ah si ay u soo baxdo iyo il furan.
URL dajinta waa ii Click .
Barnaamijku waxa uu la soo saaro by Systems Pinnacle iyo halkan ku dhiirigelinayaan in uu waxa loo yaqaan ee ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada tahay in la hubiyo in user waxaa had iyo jeer wada cafiyo dhigi lahaa iyo waxyaabaha laga abuuray Waxaa Tusaale gobolka ugu fiican oo ee farshaxanka.
Shaqeynta guud ee barnaamijka xaqiiqdii waa mid fiican oo u hubiyaa in user la cafiyo hab kasta oo macquul ah.
Xawaare maaraynta fog ka weyn marka la barbar dhigo dadka kale ee liiska.
Taageero 24/7/365 ma jirtaa in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay arrintan la xiriira ka.
Barnaamijka waxaa lagala soo bixi karaa Halkan .
Source hirgaliyo waa horumarinta waslad ugeeyaan ah ee barnaamijka iyo waxa ay taasi la hubiyo in image sidoo kale video khalkhalgelinta waa kan ugu fiican iyo barnaamijyada ugu horumarsan ayaa waxaa sidoo kale lagu sameeyaa barnaamijkan il xor ah oo furan. Kooxda waxaa ka mid ah horumarinta ee la soo dhaafay ayaa sidoo kale la timaado barnaamijyo laga cabsado in la sameeyo nolosha fudud.
Barnaamijku waa u fududahay in la fahmo iyo in lagu rakibo. Marka waxaa la rakibay tutorial in yimaado oo ay la socdaan waa in laga akhriyo.
Shaqeynta guud ee barnaamijka sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka la eego processing Dufcaddii.
Waxaad kartaa Download Jahashaka ah in ay isku day ah.
Sida loo abuuro iMovie stop mooshin
Sida loo abuuro dhaceen Maps in iMovie
> Resource > iMovie > Top 5 iMovie kale oo lacag la'aan ah PC